ICE MBR Membrane Module momba ny fitsaboana rano maloto amin'ny indostrialy ho an'ny rafitra Tower Cooling
Membrane Bioreactor (MBR) dia karazana haitao mandroso novolavolaina hatramin'ny faran'ny taonjato faha-20 izay nahatsapa ny fifangaroana mahomby amin'ny teknolojia fisarahana manoloana ny teknolojia biolojika. Ny teknolojian'ny fisarahana amin'ny membrane dia manolo ny fomba fanao nentim-paharazana maloto sy ny singa sivana mahazatra; ny fahafahany misaraka matanjaka dia afaka manao ny turbidity SS ho zero. Ny fotoana fihazonana hydraulic (HRT) sludge age (SRT) dia misaraka tanteraka; ny rano fivoahana dia manana kalitao tsara sy milamina izay hampiasaina indray raha tsy misy ny fitsaboana amin'ny ambaratonga fahatelo. Manana ny rano ara-toekarena sy mahomby miaraka amin'ny fiarovana avo lenta, nivelatra be ny habaka fampiharana ny fanodinana rano maloto.
Towers fanamafisana mihodina mihodina-mihodina-counter / Cooler mihodina mihodina-etona
Ny rivotra maina mangatsiatsiaka dia miditra amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo amin'ny lafiny roa amin'ny tilikambo any ambany, ary misintona miakatra sy ambony ny coil amin'ny alàlan'ny herin'ny fanaka axial izay napetraka eo an-tampony, mampitroatra ny rano latsaka (avy amin'ny rafitra fizarana rano) ary mampitombo ny fahombiazan'ny hafanana amin'ny toetran'ny rivotra mando mafana navoakan'ny tilikambo ho amin'ny atmosfera. Mandritra io fizotran'asa io dia misy etona kely amin'ny rano miverina mivezivezy etona noho ny famindrana hafanana miafina amin'ny alàlan'ny fantsona sy rindrin'ny coil, manala ny hafanana amin'ny rafitra. Amin'ity fomba fiasa ity, noho ny fihenan'ny evaporative dia mampihena ny mari-pana amin'ny rano sisa tavela ary voatahiry ny angovo fan.
Towers fanamafisana mihodina mihombo-mikoriana miampita / fantsom-pifamoivoizana mihidy
Amin'ny maha-tilikambo fihenan'ny fihenan'ny etona azy, ny ranon'ny tilikambo (rano, solika na glycol propylene) dia ampiasaina mba hanomezana fampangatsiahana izay voahidy ao anaty coil ary tsy miharihary mivantana amin'ny rivotra. Ny coil dia maningana ny tsiranoka mandeha amin'ny rivotra ivelany, mitazona azy io ho madio sy mandoto maimaimpoana amin'ny tadivavarana mihidy. Any ivelan'ny coil dia misy rano mipetaka amin'ny coil ary miharo amin'ny rivotra ivelany mba hivoaka ny rivotra mafana avy amin'ny tilikambo mangatsiaka mankany amin'ny atmosfera satria etona amin'ny rano dia etona. Ny rano mangatsiaka ivelan'ny coil dia averina mivezivezy ary ampiasaina indray: ny rano mangatsiaka dia miverina amin'ny fiandohan'ny fizotrany handraisana hafanana bebe kokoa mandritra ny etona. Manampy amin'ny fitazonana tsiranoka madio izy io izay hampihena ny vidin'ny fikolokoloana sy ny fandidiana.
Towers fanamafisana vita amin'ny volavolan-dalàna miaraka amin'ny fisehoana mahitsizoro
Ny tilikambo fihenan'ny faritra misokatra dia fitaovana izay mampiasa fotokevitra voajanahary: rano farafahakeliny manaparitaka ny hafanana amin'ny alàlan'ny setroka an-tery mba hampangatsiaka ireo fitaovana mifandraika amin'izany.
Indostrialy Draft Cross-flow Towers ho an'ny famokarana herinaratra, HVAC lehibe ary fotodrafitrasa indostrialy
Ireo tilikambo fihenan'ny andian-dahatsoratra dia entanin'ny drafitra, tilikambo miampita ary namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa amin'ny fampisehoana, firafitra, haingam-pandeha, fanjifana herinaratra, lohan'ny paompy ary vidin'ny lasibatra
Rafitra fanefitra simika ICE ho an'ny fitsaboana rano amin'ny rafitra Tower Cooling
Ny fiasan'ny rafitra fanamafisana dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fahamendrehana, ny fahombiazana ary ny vidin'ny asa indostrialy, andrim-panjakana na indostrian'ny angovo. Ny fanaraha-maso sy ny fihazonana ny fifehezana ny harafesina, ny fametrahana, ny fitomboan'ny mikraoba ary ny fiasan'ny rafitra dia ilaina mba hanomezana tombam-bidy ny vidin'ny asa. Ny dingana voalohany hahatratrarana farafaharatsiny dia ny fisafidianana programa fitsaboana sahaza sy ny fepetra fiasa mba hampihenana ny adin-tsaina amin'ny rafitra.
ICE Industrial Industrial Softener System ho an'ny rano loharano mangatsiaka
Ny fanalefahana rano dia dingan'ny fanadiovana rano izay mampiasa teknolojia fifanakalozana ion mba hanesorana ireo mineraly voajanahary toy ny kalsioma sy manezioma avy amin'ny rano hisorohana ny fananganana fantsona sy fitaovana. Ny fizotrany dia matetika ampiasaina amin'ny sehatra ara-barotra sy indostrialy hanamorana ny fampiasana mora foana ary hanitatra ny androm-piainan'ny fitaovana fitantanana rano.
Rafitra fanivanana fasika mahomby amin'ny ICE avo lenta amin'ny fitsaboana rano amin'ny fivezivezin'ny Towers Cooling Towers
Ny poti-kaonty tompon'andraikitra amin'ny fanodikodinana ny sehatry ny famindrana hafanana dia kely kokoa noho ny 5 microns. Ny sivana fantsona fanamafisam-peo avo lenta an'ny ICE dia manala ireo sombin-javatra tena tsara ireo mba hanomezana ny tena tombony azo amin'ny rano mangatsiaka madio.
ICE Industrial Reverse Osmosis System ho an'ny Cooling Tower Water System
Reverse Osmosis / RO dia teknolojia ampiasaina hanalana ny solo-tena sy loto maloto amin'ny rano amin'ny alàlan'ny membrane RO semi-permeable izay mamela ny fivezivezin'ny rano fa mamela ny ankamaroan'ny solida simba sy loto hafa. Ny fonosan'ny RO dia mitaky rano anaty tsindry avo (lehibe kokoa noho ny tsindry osmotic) hanaovana izany
Condenser evaporative mahomby be ho an'ny rafitra Refrigeration / Cold Chain / sistem HAVC